MAC OSအတွက် MT4 Metatrader4
Mac OSအတွက် MT4
MAC OSအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ METATRADER 4ဆော့ဝဲလ်က ဘာတွေကောင်းလဲ?
CFDအမျိုးအစားနှစ်ခု၊ ရေနံ၊ ငွေကြေးနှင့် ရွှေသတ္တုတွေကို - အရောင်းအ၀ယ်အော်ဒါဖွင့်ရာမှာ ဆိုင်းငံ့ကြန့်ကြာခြင်းမရှိဘဲ leverageဆ ၃၀၀၀ အထိရယူနိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာ ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။.
Expert Advisorsရိုဘော့များထည့်သွင်းနိင်ပြီး အင်ဒီကေတာအများအပြားတပါတည်း ပါဝင်ခြင်း
ဈေးကွက်ဇယားကြည့်နိုင်သည့် toolsများနှင့် Taအင်ဒီကေတာ ၅၀နှင့်အထက်ပါရှိခြင်း
အင်ဒီကေတာအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပြီး အချိန်များကိုလဲ လိုသလိုပြောင်းလဲကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
မှတ်တမ်းဟောင်းများထိန်းသိမ်းထားမှုကို လိုသလိုပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း နှင့် ထိုဒေတာများကို ထည့်သွင်း/ထုတ်ယူ လုပ်နိုင်ခြင်း
ဒေတာများအားလုံး လုံခြုံမှုနှင့် အရံသိမ်းဆည်း back-upလုပ်ထားနိုင်မှု
အင်တာနယ် မေးလ် စာပို့ စနစ်ပါဝင်ခြင်း
MetaTrader4 နှင့် Metaquotes Language4အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်များ တပါတည်းပါဝင်ခြင်း
ဤနေရာကို (.dmg file)ကလစ်ပြီး MT4 ဆော့ဝဲလ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ
ဒေါင်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ FBS.dmg ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ
အက်ပလီကေးရှင်း ဖိုဒါထဲက appကို ဆွဲယူလိုက်ပါ
FBS-Trader4-Mac အက်ပလီကေးရှင်းကို ညာဘက် ကလစ်နှိပ်ပြီး "Open"ကိုရွေးပါ
ပရိုဂရမ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အကောင့်ဝင်ရမယ့် login၀င်းဒိုးကို မြင်ရမှာပါ
သင့်ရဲ့ ဒီမိုအကောင့် သို့ ရီးရဲအကောင့်ရဲ့ loginအချက်အလက်တွေကို ဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ
EAကို ဘယ်လို အင်စတောလ်လုပ်မလဲ
အက်ပလီကေးရှင်း ဖိုဒါကို သွားပါ
FBS-Trader4-Mac ကိုရှာပြီး ရိုက်ကလစ်နှိပ်ကာ "Show Package Contents"ကို ရွေးပါ
"drive_c" ဖိုတာကို ဖွင့်ပြီး (drive_c/Program files/FBS Trader 4/MQL4/Experts) ရှိ သင့်၇ဲ့ EAကို အင်စတောလုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ EAကို အတည်ြ့ပုပေးစေဖို့အတွက် အက်ပလီကေးရှင်းကို Restartချလိုက်ပါ
အက်ပလီကေးရှင်း ဖိုဒါထဲက BS-Trader4-Macကို ဒလိလုပ်ဖျက်ပစ်ပါ
* FBS-Trader4-Macဖြင့် ရောင်းဝယ်နေစဉ်အတွင်း MetaTrader Market တံဆိပ်အားရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မှတ်ထားပါ